> Resource > Android > Sida loo saar Preinstalled Apps on Android
Waxaan ka helay oo ah Play Xperia la timid wax badan oo Chine preinstalled in inaysan ii ogolaaneynin inaan tirtirto laakiin waxaan u baahan tahay si loo badbaadiyo xasuusta, ee ma suuroowdaa jid waxaan iyaga uninstall karaa?
The barnaamijyadooda Android preinstalled yihiin kuwa si toos ah rakibay OS ee Android. Si ka duwan barnaamijyadooda ku rakiban in kaadhka xusuusta telefoonka ama kaarka SD, ee Chine Android preinstalled ma fududa in uninstall, haddii aad heli karaan in ay aagga ka mid ah OS Android ah.
Sida kaliya ee si aad u hesho ogolaanshaha waa in la rujin telefoonka Android ama kiniin. On your rujin phone Android ama kiniin ah oo keliya ayaa aad uninstall karaan barnaamijyadooda preinstalled effortlessly. Si kastaba ha ahaatee, soo afjarno phone Android ama kiniin qaadan kartaa qalab aad ka yar tahay khatarta. Sidaas darteed, waa in aad fahamto khatarta ka hor soo afjarno.
Saar barnaamijyadooda preinstalled ka phone / kiniin ah Android
Haddii aad rujin telefoonka Android ama kiniin ah, waa in aad rabto in aad ka saarto barnaamijyadooda preinstalled on Android mar? Halkan waa xal kharash-ool ah oo aad u - ka Wondershare MobileGo for Android (dadka isticmaala Windows). Waa dhan-in-hal tababare Android. Sidaa daraadeed, waxaad si fudud ka saari karaan barnaamijyadooda preinstalled ka phone Android rujin ama kiniin in Dufcaddii.
Download barnaamijka si ha Android saarto barnaamijyadooda preinstalled.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad hesho more info oo ku saabsan soo afjarno telefoonka Android ama kiniin ah, waxaad eegi kartaa halkan .
Ku rakib Wondershare MobileGo for Android ku on your computer. Markaas, waxa maamula.
Tallaabada 1. Isku telefoonka Android rujin ama kiniin in kombiyuutarka
In tallaabadaas, isticmaali cable USB ama Wi-Fi in ay ku xidhmaan telefoonka Android geelaa ama kiniin in kombiyuutarka. Marka aad telefoon Android geelaa ama kiniin ah ee la ogaado, barnaamijkan waxaa muujin doonaa in uu furmo suuqa hoose. Laga soo bilaabo galeeysid bidix, waxaad eegi kartaa music, videos, sawiro, xiriirada, barnaamijyadooda, SMS, iyo files on kaadhka xusuusta telefoonka iyo kaarka SD.
Fiiro gaar ah: Sida dadka isticmaala ku WiFi isticmaalaya, waxaa idinku waajib ah si loo soo dajiyo file MobileGo APK ah ee aad taleefan Android ama kiniin hore. Riix halkan si aad u hesho more info.
Tallaabada 2. saar barnaamijyadooda preinstalled telefoonka Android ama kiniin
Raadi iyo guji Apps galeeysid bidix. Dhammaan barnaamijyadooda ku saabsan rujin phone Android ama kiniin ku muujisan yihiin xaq. Dooro Chine ee preinstalled in aad jeceshahay in aad ka saarto. Riix uninstall . In wada hadal pop-up ah, guji Haa si ay u bilaabaan app ka saarida preinstalled. Markaas, inta lagu guda jiro nidaamka dalka looga saarayo, hubi in aad rujin phone Android ama kiniin aan la jaro.
Fiiro gaar ah: The Wondershare MobileGo for Android taageertaa ay ka saareen barnaamijyadooda preinstalled ka badan oo rujin phone Android ama kiniiniga. Halkan, waxaad ka heli kiniiniyada telefoonka ama lagu daydo Android badan .
Hambalyo! Waxaad u suurtagashay in ay tirtirto barnaamijyadooda preinstalled telefoonka Android ama kiniin. Hadda, guji Google Play Apps on geeska bidixda ah ee kore in ay soo baxdo iyo rakibi barnaamijyadooda aad jeceshahay in telefoonka Android ama kiniin. Ama guji rakib si loo soo dajiyo barnaamijyadooda aad doonayay ka PC in telefoonka Android ama kiniin.
Video wuxuu kuu sheegayaa sida aad u soo saarto barnaamijyadooda preinstalled qalabka Android
Download MobileGo for Android qalab si la isugu dayo ay ka saareen barnaamijyadooda preinstalled ka qalab android.